Mourinho: Markasta Aan Guardiola Ka Horimaado, Casaan Ayaa Ciyaaryahan La Iga Siiyaa.
Jose Mourinho ayaa sheegtay inay jirto caado ah in casaan laga siiyo mid ka mid ah ciyaartoydiisa mar kasta oo uu tartan Yurub ah ka horyimaado Pep Guardiola.
Chelsea ayaa xalay rigoore 5-4 looga qaaday koobka Uefa Super Cup ka dib markii iyaga iyo Bayern Munich ay ku kala bixi waayeen barbaro 2-2 ah 120 daqiiqo oo ay ciyaareen.
Ramires ayaa casaan ka qaatay Blues markii uu jaale labaad ku qaatay qalad xun uu ku galay Mario Gotze kaasoo xitaa noqon karay casaan toos ah.
“Waa nasiibkeyda Yurub. Mar kasta oo aan ka horimaado Guardiola, mid ka mid ah ciyaartoydeyda ayaa casaan la siiyaa” ayuu Mourinho u sheegay Sky Sport Italia.
“Waxa ay dhacday markii aan Inter joogay isna uu Barcelona joogay, ka dib Real Madrid weliba in ka badan hal jeer, xitaa Chelsea ka hor inta aanan Inter aadin, haatana mar kale.”
Special One ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu u arko qorshaha uu Massimo Moratti uga iibinayo kooxda Inter Milan maalqabeenka reer Indonesia Erick Thohir.
“Inter mar walba waa Inter. Marka si loo fiiriyo waan ka xanuunsanayaa arintaas, sababtoo ah Inter-teyda waa mida Moratti iyo qoyskiisa, laakiin waxaana qabaa hadii uu go’aan gaaray inay markaas tahay mid u fiican Inter-teena.
“Si kastaba, mar walba waan garab taaganahay kooxdaan.”
Suuqa kala iibsiga waxa uu xirmayaa 2da bisha September, madaama 31ka August iyo 1da September ay ku soo aaday isbuuc dhamaad sabti iyo axad oo labadaas maalmood aysan wax shaqo ah ka jirin wadamada Yurub.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa xilli danbe u dhaqaaqay xiddiga da’da yar ee u soo baxay Jarmalka ee kooxda Schalke Julian Draxler kaasoo lagu qiimeeyo adduun lacageed oo gaaraya 60 milyan ginni. (Daily Mirror)
Gudoomiyaha Spurs Daniel Levy ayaa sheegtay inuu guul ka gaaray suuqa kala iibsiga, madaama ay ku qasbeen Arsenal inay xilli danbe sugaan inay u dhaqaaqaan ciyaartoyda ay Real Madrid dooneyso inay iska iibiso. (Daily Mirror)
Manchester United ayaa diyaar u ah inay 40 milyan ginni ku qarashgareyso saxiixyada ciyaartoyda khadka dhexe ee kooxaha Athletic Bilabo iyo AS Roma, Herrera iyo Daniel De Rossi. (Daily Telegraph)
Sidoo kale Man United ayaa ka fekereysa inay maanta iyo berri qarashgareyso 77 milyan ginni iyadoo doonaya inay soo xerogeliyaan Ander Herrera, Daniele De Rossi, Leighton Baines iyo Marouane Fellaini. (The Sun)
Liverpool ayaa gacanta ku soo dhigtay 20 jirka daafaca kooxda Sporting Lisbon Tiago Ilori, iyagoo kula soo wareegaya heshiis 8 milyan ginni ah ka dib markii ay saxiixiisa kaga adkaadeen kooxaha Monaco iyo Valencia. (Daily Mirror)
Liverpool ayaana ku dhow heshiis 25 milyan ginni ah oo ay labo ciyaaryahan kula soo wareegeyso daafaca PSG Mamadou Sakho iyo daafaca Sporting Lisbon Tiago Ilori, laakiin waxa ay tartan adag kala kulmayaan saxiixa heshiiska amaahda ee Victor Moses. (Daily Mail)
Manchester City ayaa ogolaansho ka heshay Atletico Madrid oo ku aadan inay 3.5 milyan ginni kula wareegi karaan daafaca 32 jir ah Martin Demichelis. (The Sun)
Liverpool ayaa qarka u saaran inay ku guuleysato heshiis 5 milyan ginni oo amaah ah oo ku soo qaadaneyso xiddiga garabka uga ciyaara Chelsea Victor Moses oo 22 sanno jir ah. (Daily Star)
Real Madrid ayaa sheeganeysa inay ka dhaadhiciyeen Tottenham inay Gareth Bale ku iibiso 91 milyan euro ama 78 milyan ginni, taasoo ah lacag ka yar lacagtii rikoorka adduunka ee ay ku soo iibsadeen Cristiano Ronaldo. (Daily Mail)
Arsenal ayaa ka fekereysa inay la soo wareegto xiddigii hore ee Chelsea 28 jirka Salomon Kalou oo ay kala soo wareegto kooxda Faransiiska Lille. (Daily Mail)
Kooxda Jarmalka ee Schalke ayaa dalab 5 milyan ginni ah ka soo gudbisay weeraryahanka Tottenham Emmanuel Adebayor, waxaana ay kalsooni ku qabaan inay bixin karaan mushaharkiisa. (Daily Mail)
Ciyaaryahanka Manchester City Gareth Barry oo 32 sanno jir ah ayaa diyaar u ah inuu dhimo mushaharkiisa si uu heshiis amaah ah ugu biiro Everton. (Daily Mail)
Kooxaha Ingariiska ee Manchester United iyo Arsenal ayaa loo soo bandhigay hadii ay doonayaan 31 jirka Real Madrid Kaka, kaasoo sidoo kale ay dooneyso kooxdiisa hore AC Milan. (Daily Mail)
Kaka ayaa u dhow inuu ku biiro Milan isagoo qirtay inuu u xiisay Italy, halka CSKA Moscow ay mar kale Milan ka soo diiday dalab ay ka gudbiyeen Keisuke Honda. (Football Italia)
AC Milan ayaana isku sabarsiisay haatan inay ka sabraan Honda ilaa iyo bisha Janaayo markaasoo uu si xor ah ugu soo biiri doono kooxda San Siro ka dhisan, madaama qandaraaskiisa CSKA Moscow uu ku egyahay bisha December ee sannadkan. (La Gazzetta dello Sport)
Roma ayaa lagu soo waramayaa inay dalab 7.5 milyan euro oo wada lahaansho ah ay ka gudbiso daafaca kooxda Caglairi Davide Astori, kaasoo sidoo kale diirada u saaran AC Milan. (Sky Sport Italia)
Man Utd ayaa dalab 10 milyan euro ka gudbisay Daniele De Rossi, laakiin ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa u sheegay inuusan xiiseynin inuu u dhaqaaqo Old Trafford. (La Gazzetta dello Sport)
Waa soo socotaa..
Xavi Iyo Alexis Sanzhez Oo Seegaya Kulanka Barca Ay U Safreyso Valencia.
Tababare Tata Martino ayaa magacaabay 19 ciyaaryahan oo Barcelona ah oo uu habeen danbe kala hortagi doono kooxda Valencia.
Blaugrana ayaa u safreysa habeen danbe Mestalla Stadium, laakiin waxaa ka maqnaan doona Xavi Hernandez iyo Alexis Sanchez.
Labada ciyaaryahan ayaa laga nasasiiyay kulankaan, si kastaba Lionel Messi iyo Adriano ayaa taam u noqday in kulankaan lagu soo darro.
Kooxda Barcelona Ee U Safreysa Valencia: Squad: Valdés, Pinto, Montoya, Piqué, Fàbregas, Pedro, Iniesta, Messi, Neymar, Dos Santos, Mascherano, Bartra, Sergio, Song, Jordi Alba, Adriano, Tello, Dani Alves, Sergi Roberto
Kaka Oo Ku Dhawaanaya Inuu Ku Laabto AC Milan.
Kaka ayaa u muuqda inuu ku dhawaanayo inuu ku laabto AC Milan xagaagan ka dib markii uu qirtay inuu u xiisay Italy wax badan.
Kubadsameeyahan reer Brazil ayaa talaadadii hore qirtay inuu doonayo inuu ka tago Real Madrid, waxaana wararka ay soo jeedinayaan in Rossoneri iyo kooxo kale oo England ka dhisan inay xiiseynayaan 31 jirkaan.
“Aad ayaan ugu xiisay Italy” ayuu Kaka u sheegay barnaamij muuqaal ah oo ka baxa website-ka Simona Ventura.
“Mar walba oo aan fursad helo, waan ku faraxsanahay inana arko asxaabteyda Talyaaniga ah.”
Sida ay sheegeysa Sky Sport Italia wadahadalada heshiiska shaqsiyadeed ee Milan iyo Kaka ayaa ah aan si wacan u socon haatan, iyadoo Kaka uu jeclaan lahaa inuu xilli ciyaareedkii mushahar ahaan u qaato 8 milyan euro halka Milan ay u soo bandhigeyso kaliya 3 milyan euro.
Rudi Garcia Oo U Sheegay Man United: Waad Soo Daahdeen, De Rossi Waxa Uu Sii Joogayaa Roma.
Tababaraha kooxda AS Roma Rudi Garcia ayaa kalsooni ku qaba in Daniele de Rossi uu sii joogi doono kooxda ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Man United ay dalab ka gudbisay ciyaaryahanka khadka dhexe.
Waxaa la isla dhexmarayay in United ay dalab 10 milyan ginni ka gudbisay De Rossi iyadoo tababare Moyes uu isku dayayo inuu xoojiyo kooxdiisa ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga.
De Rossi ayaa hore loola xiriiriyay Chelsea iyo Manchester City, laakiin Garcia ayaa sheegay inuusan filaneynin in 30 jirkaan uu kooxda ka tago.
“Daniele de Rossi kaliya mahan ciyaaryahan weyn, laakiin sidoo kale waa nin weyn” ayuu Garcia ku sheegay shir jaraa’id ka hor kulanka ay berri la leeyihiin Verona.
“Waxa uu halkaan Roma joogaa waqti dheer, waxaana uu doonayaa inuu maaliyadan ku sii ciyaaro.
“Waxaan la hadalnay markii uu ka soo laabtay fasaxa, waxaana u sheegnay hadii waqti cayiman la dhaafo inuu anaga nala sii joogi doono.
“Waxa uu halkaan sii joogi doonaa xilli ciyaareedkan, waana wax aad ii qancinaya.”
Kevin-Price Boateng Oo Tijaabada Caafimaadka U Maraya Schalke.
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda AC Milan Kevin-Prince Boateng ayaa ku laabanaya Bundesliga ka dib markii la xaqiijiyay inuu tijaabada caafimaadka u marayo kooxda Schalke ee dalka Jarmalka.
Kooxda Bundesliga ka dhisan Schalke ayaana xaqiijisay in ciyaaryahanka reer Ghana Boateng inuu iyaga haatan tijaabada caafimaadka u marayo.
26 jirkaan ayaa labo gool uu dhaliyay habeenkii arbacada ka caawisay kooxda AC Milan inay u soo baxdo wareega group-yada Champions League, waxaana uu haatan ku laabanayaa Jarmalka.
Boateng ayaa ka soo baxay kooxda Hertha BSC, ka hor inta uusan ku biirin kooxda Tottenham, iyadoo amaah uu sidoo kale ugu ciyaaray Borussia Dortmund, ka hor inta uusan si joogta ah ugu biirin kooxda Portsmouth.
Boatenga ayaan 2010kii ku biiray AC Milan isagoo ka mid noqday ciyaartoyda muhimka ah ee kooxda AC Milan, waxaana uu u saftay 74 kulan oo Serie A ah isagoo dhaliyay 10 gool oo Serie A ah.
Bixitaanka Boateng ayaa ka dhigeysa in Milan ay wadada u sii baneeneyso soo laabashada Kaka kaasoo dalbaday in Real ay iska iibiso.
Arsene Wenger: Bendtner Waxa Uu Sii Joogi Doonaa Arsenal.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in ku guuldareysashadooda inay weeraryahan soo xerogeliyaan inay la micno tahay in Nicklas Bendtner uu kooxdii sii joogi doono.
Arsenal ayaa u muuqatay inay ugu danbeyn lacag badan suuqa kala iibsiga galineyso xagaagan, laakiin iyadoo suuqa seddex maalmood kaliya ay ka harsan tahay, kaliya Yaya Sanogo iyo Mathieu Flamini ayaa si xor ah kooxda ugu soo biiray, waxaana ay u muuqataa in saxiix weyn ay la soo wareegaan inay sii yaraaneyso rajada laga qabo.
Weeraryahanada sida Luis Suarez, Gonzalo Higuain iyo Karim Benzema ayaa lala xiriirinayay Arsenal, laakiin midkoodna heshiis kuma imaan kooxda North London ka dhisan, waxaana tababaraha Faransiiska uu qirtay in Bendtner laga yaabo inuu kooxda u ciyaaro xilli ciyaareedkan.
Weeraryahanka Denmark Bendtner ayaa u muuqday mid ka tagaya kooxda laakiin heshiisyo uu ugu dhaqaaqi lahaa Malaga, Eintract Frankfurt iyo Hull City ayaa dhamaantood burburay madaama uu ciyaaryahanka dalbanayo mushahar qaali ah.
Bendtner ayaan u ciyaarin Arsenal muddo labo xilli ciyaareed ah, isagoo amaah ku soo joogay kooxaha Sunderland iyo Juventus.
“Fursada uu Bendtner haatan ku baxo waa ay yar tahay” ayuu yiri Wenger maanta.
“Haddii uu si fiican u soo laaban islamarkaana uu taam yahay, waan isticmaali doonaa.”
RASMI: Tottenham Oo La Soo Wareegtay Vlad Chiriches, Saxiixoodii Lixaad Ee Xagaaga.
Kooxda Tottenham ayaa ku dhawaaqday inay heshiis ka gaartay saxiixa daafaca Vlad Chiriches oo ay kala soo wareegeen kooxda FC Steaua Bucharest.
Daafaac dhexe ayaa noqonaya saxiixii lixaad ee tababare Andre Villas Boas uu sameeyo xagaagan, waxaana 23 jirkaan uu ka yimid kooxda reer Romania oo uu ka caawiyay hanashada horyaalka xilli ciyaareedkii hore.
21 jirkaan ayaa 62 kulan u saftay kooxda ka dhisan caasimada Romania, isagoo u dhaliyay afar gool, waxaana uu 19 kulan u saftay xulka qaranka Romania.
Waxa uu Chiriches ku biirayaa saxiixyada cusub ee xagaagan Roberto Soldado, Paulinho, Etienne Capoue, Nacer Chadli iyo Erik Lamela oo ay ala soo wareegayaan AS Roma.
Tottenham ayaana qarashgareysay xagaagan lacag ku dhow 100 milyan ginni, iyadoo lacgtaas la filayo inay inteeda badan ka soo laabato heshiiska ay Gareth Bale kaga iibinayaan Real Madrid.
Ibrahimovic: Uma Baahni Naanees, Inaad Iga Cabsato Haddii Aad Rabto Kaliya I Daawo Anigoo Ciyaaraya.
Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay inuusan u baahneyn naanees uu ku cabsi geliyo ciyaartoyda ka soo horjeeda sababtoo ah tayada ciyaartiisa ayaa ugu filan inuu kaga cabsiiyo daafacyada ka horyimaada.
Weeraryahanka PSG oo qaatay gooldhalinta Ligue 1 xilli ciyaareedkii hore, ayaa waxaa France kula soo biiray xagaagan Edinson Cavani oo loo yaqaano ‘El Matador’ iyo Radaml Falcao oo loo yaqaano ‘El Tigre’.
Ibrahimovic ayaana wax laga weydiiyay sababta uusan naanees laga cabso sida ciyaartoydaas oo kale u qaadan, waxaana uu sheegay in ficilka uu ka cod dheer yahay hadalka.
“Maxaan u lahaan waayay naanees? Inaad iga cabsato hadii aad rabto kaliya i daawo anigoo ciyaaraya” ayuu xiddiga reer Sweden u sheegay jariirada Le Parisien.
Weeraryahanka ayaa sidoo kale u jawaabay Mario Balotelli kaasoo habeen hore sheegay in isbarbardhiga isaga iyo Zlatan lagu sameeyo ay amaan weyn u tahay Ibrahimovic.
“Waa wax fiican in Balotelli uu aniga iska key barbardhigo” ayuu yiri 31 jirkaan. “Sababtoo ah aniga isaga isma barbardhigo.”
Dhanka kale Ibrahimovic ayaan shabaqa soo taaban xilli ciyaareedkan intii uu u ciyaarayay PSG, laakiin waxa uu sheegay in muhiimadiisa ay tahay inuu koobab ka caawiyo kooxdiisa.
“Haddii aanan hal gool dhalinin sannadkan, laakiin taas bedelkeeda ay PSG ku guuleystay Champions, i aamin dooqaas ayaan qaadan lahaa dhibaato la’aan.”
Gervinho: Wenger Kalsooni Iguma Qabin Markii Aan Joogay Arsenal.
Weeraryahanka Roma Gervinho ayaa sheegay in macalinkiisii hore Arsene Wenger inuusan fursad u siinin inuu gaaro meeshiisii ugu sareysay intii uu joogay Arsenal.
26 jirkaan reer Ivory Coast ayaa sheegay inuusan mar walba helin kalsoonida Wenger, laakiin uu haatan indhaha ku hayo tartan Serie A ka dib markii uu bishaan hortaanteedii ka tagay Emirates.
“Arsene Wenger waxaan qabaa inuu ka mid yahay tababarayaasha ugu waa weyn” ayuu Gervinho u sheegay suxufiyiinta.
“Waa qof aan aad u ixtiraamo, waana ku faraxsanahay inaan kooxdiisa u ciyaaray.
“Laakiin waxaa qabaa in weeraryahanada ay u baahan yihiin in tababarayaashooda ay kalsooni ku quudiyaan, waxaan jeclaan lahaa in fursad la ii siiyo.
“Laakiin sidaasi xaalka ma uusan aheyn, buugeygana mar hore ayaa la daboolay.
“Laakiin haatan waxaan diirada saarayaa kaliya Roma iyo inaan la shaqeeyo Rudi Garcia, taas ayaana muhim ii ah.”